News 18 Nepal || किन मनाइन्छ महाशिवरात्री पर्व ?
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा महाशिवरात्री पर्वको विशेष महत्व छ । यो वर्ष फागुन २७ गते अर्थात भोलि बिहिबारका दिन महाशिवरात्री पर्व मनाइँदैछ । हिन्दु क्यालेन्डरमा १२ मासमा १२ शिवरात्री हुन्छन्, तर महाशिवरात्री र शिवरात्रीमा ठुलो भिन्नता रहेको छ । वास्तवमा महाशिवरात्री किन मनाइन्छ ? भन्ने कुरा धेरैलाई चासोको विषय हुन सक्छ ।
महाशिवरात्री मनाइने विभिनन धार्मिक मान्यताहरु छन् । पौराणिक र धार्मिक मान्यताहरुका अनुसार तीन कारणहरुले महाशिवरात्री पर्व मनाउने गरिन्छ । सबैभन्दा पहिलो कारण शिव–पार्वतीको विवाहलाई मानिन्छ । यो कारण सबैभन्दा बढी प्रचलित छ । जसका कारणले महाशिवरात्रीमा विभिन्न स्थानहरुमा राति शिवको जन्ति पनि निकाल्ने परम्परा रहेको छ ।
माता पार्वती र भगवान शिवको विवाह फागुन मास कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिमा भएको थियो । उक्त तिथिमा भगवान शिव र माता पार्वतीको महामिलनको रुपमा पनि मनाइन्छ । महाशिवरात्रीको दिन शिव–पार्वतीको विवाह हुनाले यसको महत्व छ । भनिन्छ, यो दिन भगवान शिवको पूजा आरधना गर्नाले भगवान शिव छिट्टै प्रसन्न हुन्छन् ।
महाशिवरात्रीको ब्रत बस्नाले यदि कसैको विवाहमा बाधा–अड्चन आएको छ भने समस्त बाधा अड्चनहरु कम हुन्छ र छिट्टै विवाह हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ । दोस्रो कारण महादेवको शिवलिङ्ग स्वरुपलाई मानिएको छ । पौराणिक मान्यता अनुसार महाशिवरात्रीको दिन नै भगवान शिव आफ्नो शिव लिङ्ग स्वरुपमा प्रकट भएका थिए ।
त्यो समयमा सबैभन्दा पहिले उनको यो स्वरुपको विधिपूर्वक पूजा–अर्चना गर्ने बम्हा र विष्णु थिए । त्यही कारणले महाशिवरात्रीको दिन विशेष प्रकारले शिव लिङ्गको पूजा आरधना गर्ने विधान रहेको छ । तेस्रो कारणको रुपमा विषपान गरेर संसारलाई संकटबाट बचाएकोलाई मानिएको छ । समुद्र मन्थनबाट निस्किएको विष पिएर भगवान शिवले यो सृष्टिलाई संकटबाट बचाएका थिए भन्ने धार्मिक विश्वा छ ।
यही कारणले नै महाशिवरात्री मनाइन्छ । सागर मंथनबाट निस्केको विषलाई पिएर भगवान शिवको गला निलो भएको थियो । जसका कारण भगवान शिवलाई निलकण्ठ पनि भनिन्छ । त्यसो त शिवरात्री र महाशिवरात्रीमा केही अन्तर छ । हिन्दु क्यालेन्डरको प्रत्येक मासको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिलाई शिवरात्रीको रुपमा लिइन्छ । यो मासिक शिवरात्रीको नामले पनि प्रचलित छ ।
फागुन मास कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिमा महाशिवरात्रीकाृ नामले चिनिन्छ । पौराणिक मान्यताहरुका अनुसार यो दिन नै मध्यरातमा भगवान शिव निराकार ब्रह्माबाट साकार स्वरुप अर्थात रुद्र रुपमा अवतरित भएका थिए । त्यसैले यो तिथिलाई महाशिवरात्री भनिन्छ । यो दिन विशेष रुपले भगवान शिवको पुजा–अर्चना गरिन्छ ।